के गदै छन न्यायिक समितिमा रहेका उपप्रमुखहरु ? - Saptakoshionline
के गदै छन न्यायिक समितिमा रहेका उपप्रमुखहरु ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण ३०, २०७४ समय: २:१६:०३
इटहरी । लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय तहमा नयाँ तरिकाले काम सुरु भएको छ । गाउँपालिका/नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुखको बेग्लाबेग्लै जिम्मेवारीअनुसार काम भइरहेको छ । खासगरी उपप्रमुखको जिम्मेवारी न्यायिक निरूपणको मुख्य रूपमा छ ।
मञ्जु भण्डारी (उपप्रमुख)
कार्यविधि अभाव छ । कुनै पनि मुद्दा बुझ्नकालागि तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता अभाव छ । तैपनि आफ्नो विवेकले भ्याएसम्मका मुद्दा पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्ष आमनेसामने राखेर मेलमिलाप गराउने कामलाई निरन्तरता दिएका छौं । हालसम्म ३७ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ९ वटा मुद्दालाई छिनोफानो गरेका छौं । अरू मुद्दमाथि छलफल भइरहेको छ । प्राय: श्रीमान् श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, पारिवारिक अंश विवाद, छरछिमेकीबीच सीमा विवाद, महिला हिंसा, सामान्य झंैझगडामा चित्त नबुझेपछि न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गर्ने गरेका छन् । तालिमको व्यवस्था गर्दै छौं । उपमहानगरपालिकामा इजलास तयार हुँदैछ । बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारजस्ता मुद्दालाई प्रहरीको समन्यवमा अदालत पठाउने गरेका छौं ।
लक्ष्मी गौतम (उपप्रमुख)
सबिना चौधरी (उपप्रमुख)
न्यायिक समितिका लागि चाहिने दक्ष कानुनविद् कर्मचारी नहुदा कतिपय मुद्दा मामिलाको मेलमिलाप वा फैसला गर्न गाह्रो भएको छ । वकिल/कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिएर मुद्दा लड्दा पैसा माग्ने र दुईतिरैका पक्षसँग पैसा लिन सक्ने भएकाले वकिल प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । दरबन्दी नै राखेर सरकारले वकिल राखिदिए सबैखाले मुद्दा मिलाउन सहज हुन्थ्यो । हालसम्ममा लेनदेन नमिलेको जग्गा किचलो, नयाँ वडामा भएका योजनामा चित्त नबुझेको विषयमा निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये विवेक प्रयोग गरेर पाँचवटा मुद्दा मिलाएका छौं, अरू छलफलकै क्रममा छन् । गाउँमा लेनदेन गर्दा लिखित हुँदैन, मौखिक हुन्छ त्यस्ता मुद्दा मिलाउन समस्या भएको छ । ती मुद्दा अदालतमै पठाउने गरेका छौं ।
कमला मगर (उपप्रमुख)
जमुना पोखरेल (उपप्रमुख)